मनाङ परिवार दक्षिण कोरियाले सातौं तिलिचो कपको आयोजना गर्ने | Manang Online
काठमाडौं, २४ भाद्र । मनाङ परिवार दक्षिण कोरियाले सातौं तिलिचो कप फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने भएको छ । मनाङ परिवार दक्षिण कोरियाले छुसकको पहिलो दिन सेप्टेम्बर १२ तारिखमा उक्त तिलिचो कपको आयोजना गर्न लागेको हो ।
गत आइतवार दक्षिण कोरियाको राजधानी सिउलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त प्रतियोगिताको खेल तालिका सर्वाजनिक गरिएको थियो । सो प्रतियोगिताका लागि २७ टिमले भाग लिएको परिवारका अध्यक्ष जे.बी. लामाले जानकारी दिएका छन् ।
अध्यक्ष लामाका अनुसार फुटबल खेल्नलाइ ३२ टिमले निवेदन दिए ता पनि समय नपुग्ने भएकोले पाँचवटा टिमलाई दर्ता गरिएन । दर्शक तथा खेलाडिहरुको फुटबल खेलमा उत्साहजनक अभिरुचि भएको भन्दै अध्यक्ष लामाले भने ‘हामीले खेलको सम्पूर्ण तयारी पनि सकेका छौ । खेल समय तालिका अनुसारनै सम्पन्न हुनेछ । उनले थपे ‘आफ्नो समयमा सबै सहभागी टोली अनिवार्य रूपमा खेलमैदानमा पुग्न आग्रह गदर्छु ।’
प्रतियोगितामा फुटबल टिम दर्ता शुल्क ४ लाख कोरियन वन राखिएको छ । प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमले ३० लाख वन, दोस्रोले १८ लाख वन सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाउने छन् । प्रतियोगिता गत बर्षकै खेलमैदानमा सञ्चालन हुदै छ ।
यसै सन्दर्भमा मनाङ परिवार दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष जे.बी. लामाले आग्रह गर्दै भनेका छन् ‘कोरियामा रहेका नेपाली दाजुभाई, दिदिबहिनी तथा नेपाली संघ–संस्थाहरूलाई उपस्थिती जनाईदिनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु ।’